Maxaa kajira in DF ay xil sare u magacaawday madaxii hore amniyaadka al-shabaab?
Home Somali News Maxaa kajira in DF ay xil sare u magacaawday madaxii hore amniyaadka...
Warar Hoose oo soo baxayay maalmihii lasoo dhaafay sheegayay in Zakariye Ismaaciil Xirsi loo magacaabay Taliyaha Qeybta Sirdoonka ee Hey’adda Nabasugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA.
Ilo kala duwan ayaa sheegaya in Zakariye Ismaaciil loo magacaabay xilkaas, isagoo lagu bedelay nin horay u hayay xilkaas oo magaciisa lagu sheegay C/fataax.
Taliska Qeybta Sirdoonka ee Hey’adda NISA ayaa waxaa hoos-taga Hoggaanka Baarista, Hoggaanka Macluumaanka iyo Hoggaanka Gobolada
Zakariye Ismaaciil oo soo noqday Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab ayaa sanado ka hor isku soo dhiibay dowladda Federaalka, wuxuu ahaa sarkaalkii ugu heerka sareeyayee AlShabaab ka soo goosta ee isu dhiiba dowladda.
Waa kuma Zakariye Ismaaciil?
Zakariye Ismaaciil Xirsi oo horey uga tirsanaa madaxda ururka al-Shabab ayaa bISHII mARCH 31-Deeda isku soo dhiibay gacanta Doowlada Federaalka Soomaaliya.
Waraysi khaas ah oo uu siiyey idaacadda VOA ayaa Zakariye Ismaaciil Xirsi uu ku sheegay in Al-Qaacida uu xiriirka ka goostay Al-Shabab.
Zakariye waxaa lagu eedeeyaa inuu ahaa maskaxdii ka dambeeysay qaraxyadii Hotel Shamo iyo Hargaha iyo Saamaha, kuwaasoo lagu xasuuqay Arday Soomaaliyeed iyo shacab farabadan oo aan waxba galabsan
Sawiro: Halkaan Waa Muqdisho ma aamineysaa
Shir looga jawaabayo Fatahaadaha oo Muqdisho ka furmay
Roobab xoogan oo saacado badan ka da’ay Muqdisho
Faahfaahin: 5 Qof oo ku dhaawacantay Qarax ka dhacay Baydhabo.
Mohamed - May 18, 2018
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, ayaa...
DEG DEG: Dagaalkii Tukaraq oo war cusub uu kusoo kordhay
Hay’adda Culumada Soomaaliyeed oo baaq soo saartay
Shirkii Baydhabo oo lagu soo idleeyay magaalada Baydhabo [Akhriso]